Hetsi-piarahamonina 5 Nahavitra Nampiato Ireo Orinasa Mpitrandraka Solitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2015 7:33 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, বাংলা, English
Tsy manaiky ny Famotipotehana ny angovo ao Falkirk: Fihetsiketsehana milamina “Ny Feom-bahoaka” tamin'ny Alahady 7 Desambra 2014. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Ric Lander. CC BY-NC-SA 2.0
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Thelma Young hoan'ny 350.org, fikambanana manangana ny hetsika manerantany momba ny toetr'andro, ary navoaka indray ato amin'ny Global Voices ho ao anatin'ny fifanekena fifampizarana votoaty.
Tamin'ny volana Janoary, nahita fandresena tamina tolona naharitra ela nanoherana ireo orinasan'ny solitany ny fiaraha-monina manerantany. Indreto ny dimy amin'izy ireo.
1. Carson ao California (USA)
Niady nandritra ny taona maro ny fiaraha-monina, ary tamin'ny volana Janoary, nanapa-kevitra ny hiala amin'ny tetikasa paompin-tsolitany 200 ny California Resources Corp. Ity ny tantara.
“Tsy mila miahiahy momba ny rano sotrointsika isika, tsy mila miahiahy momba ny kalitaon'ny rivotra iainantsika isika. … Miresaka momba ny fomba fiainana ho antsika isika.” -Dianne Thomas, mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Carson Coalition vondrona fiaraha-monina
Eny, efa nahare ity zo ity ianao – nanambara fandraràna fitrandrahana solitany i Ekaosy. Fantatry ny Ekaosey tsara fa mampidi-doza hoan'ny olona, ny tany na ny toetr'andro ny fitrandrahana solitany.
Na dia izany aza, mbola tsy ampy ny hetsika satria tsy tafiditra ny fampitsaharana ny famadihana ny saribao ho etona ambanin'ny tany – izay handoroana ny saribao ambanin'ny tany ary angonina ambonin'ny tany ny entona. Saingy, efa fandresena lehibe izany !
Mampiseho ny faharetan'ny olona sy ny fiarahamonina manerana ny firenena izay niady tsy an-kiato tamin'izany indostria izany tao anatin'ny taona vitsy ny fanapaha-kevitry ny governemanta.” — Les Amis de la Terre Écosse
3. Ao Amin'ny Morontsiraka Maule, Shily
Nampahafantarina voalohany tamin'ny 2007 ny tobin'herinaratra mandeha amin'ny saribao 750-megawatt, ary nanomboka hatreo, nanohitra izany ny hetsiky ny olom-pirenena isan-karazany, antsoina hoe “Hetsiky ny Olom-pirenena ho Fiarovana Ny Morontsiraka Maule”. Nitohy ny tolona mandra-panaisotra ny fahazoan-dalana hoan'ny orinasa AES Gener ary tsy nitohy intsony ny tetikasa. Eto ny tantara momba izany.
“Niray hina tsara, navitrika sy hentitra ny fiarahamonina amin'ny famaritana ny lalam-pandrosoana manokan'izy ireo. Hoy i Rodrigo de la O, mpikarakara ny morondranomasina Maule Itata sy mpikambana ao amin'ny Firaisankinan'ny Mpitana ny rano.
4. São Paulo, Brezila
Namoaka didy fampiatoana ny fizotry ny fitrandrahana etona tao andrefan'i São Paulo ny mpitsara, sy fampiatoana koa ireo tetikasa fitrandrahana solitany. Ato ny tantara momba izany amin'ny teny Portiogey.
5. Marrickville, Aostralia
Tamin'ny 27 Janoary, nifidy hanaisotra ny fampiasam-bola amin'ny fitrandrahana solitany ny Vaomieran'ny tanànan'i Marrickville, tanàna iray ao Galles Atsimo Vaovao. Tamin'ny dingana voalohany, nanao izay ho afany ny Vaomiera mba tsy hampiasana intsony amin'ny fitrandrahana solitany ilay vola maherin'ny 15 tapitrisa dolara, miaraka amin'ny tanjona hampitomboana izany vola izany. Eto ny tantara momba izany.
“Manana fahavononana lehibe amin'ny fiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ny Vaomieran'ny tanànan'i Marrickville, manana fandaharan'asa mikendry hampihenana ny fadefasan'etona. Amin'ny alalan'ny fandraisana io fanapaha-kevitra io, maniry izahay mba tsy hamatsian'ireo orinasa ara-bola vola intsony ny fitrandrahana angovo ambanin'ny tany, tahaka ireo seranan-tsambo ao amin'ny Great Barrier Reef, na ny tetikasa eton-tsaribao ao Camden”, hoy i Max Councillor Phillips, tompon'antoka tamin'ny fanoherana ny fitrandrahana angovo ambanin'ny tany.
Mbola tsy tapitra ny tolona. Amin'ny 13 sy 14 Febroary no hankalazaina ny Andro Iraisam-pirenena ho amin'ny Tsy Fampiasam-bola ny angovo ambanin'ny tany ka hetsika eo amin'ny 500 eo ho eo ao amin'ny firenena 58 manerana ny kaontinanta enina no hotontosaina. Hitsangana ny vahoaka manerana izao tontolo izao hanohitra ny indostrian'ny fitrandrahana angovo ambanin'ny tany, ary handefa hafatra miharihary fa fotoana izao hamaranana ny vanim-potoanan'ny angovo ambanin'ny tany sy hidirana amin'ny tetezamitan'ny loharanon'angovo madio, azo avaozina ho fiarovana ny olombelona sy ny planeta.